Taona maro mahafinaritra ho an’ny fihainoana, fandikan-teny, fanoratana… ary firesahana! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2021 4:47 GMT
Nandray ny fanomezana avy amin'ny famatsiam-bola atolotry ny Rising Voices 2014 ihany koa ny fikambanan'i Sopheap, ny Ivontoerana Kambodziana Miaro ny Zon'olombelona. Tena reharehanay ianao ry Sopheap! ”
Tamim-pahafinaretana ny nihaona tamin'i Sopheap mivantana tany amin'ny Vovonana GV voalohany natrehako tany Santiago, 2010, ary vao mainka aho faly kokoa nilaza taminy fa izy no nampiditra ahy tato amin'ity vondrom-piarahamonina mahafinaritra ity. Izany hoe, noho ny dinidinika nataony tamin'i Tharum Bun no nanaovako ny fandikan-teny fitsapana nidirako ho Lingua Frantsay: Claire Ulrich, mpanoro hevitra sady namana, no nanome safidy ahy ny lahatsoratra, ary ity fitsapana ity no lasa fandikan-teny faharoa navoaka izay nitondra ny lohateny hoe : Cambodge : Une nouvelle vague de blogueuses.
Momba ny filoham-pirenena Amerikana? Tamin'ny taona 2008 no nisy ity fotoanan'ny fahasoavana sy fanantenana ity tamin'ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana an'i Barack Obama, rehefa maro ny olona no nitaintaina ary nahatsapa fa akaiky ny fanovana. Ary tamin'ity fotoana ity no tonga ity tetikasa GV mahafinaritra ity, Voices without Voices, notarihin'i Amira Al-Hussaini ary ankehitriny matory any anatin'ny arsivan'ny aterineto any ankehitriny.
Araka izany no nanaovako fanadihadiana momba ireo fanehoan-kevitra voalohany mikasika ny fifidianana an'i Barack Obama teo amin'ny faritra miteny frantsay.
Nanendry an'i Thalia, Abdoulaye ary Boukary ho an'ny Fanamby GV i Suzanne Lehn.